के तपाईं पत्रकारिता अय्यूब प्राप्त गर्न स्नातकको स्तर चाहिन्छ?
पत्रकारलाई हुन तपाईंलाई स्नातकको स्तर चाहिन्छ?
तपाईंले सम्भवतः सामान्यतया बोल्नु भएको छ, कलेजका स्नातकहरूले धेरै पैसा कमाउँछन् र कलेजको डिग्री बिना भन्दा बढी रोजगारी हुने सम्भव छ।
तर विशेष गरी पत्रकारिताको बारेमा के हो?
मैले अघिल्लो चरणमा डिग्रीको तुलनामा पत्रकारिता डिग्री प्राप्त गर्ने प्रविधि र विपश बारे पहिले लेखेको छु। तर म एक सामुदायिक कलेजमा सिकाउँछु जहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई सोध्दछन् कि उनीहरूलाई स्नातकको डिग्री चाहिन्छ वा वा दुई वर्षको सहयोगी डिग्री वा प्रमाणपत्र पर्याप्त छ।
अब, बी.ए. बिना पत्रकारिताको काम पाउन असम्भव छैन। मेरो धेरै विद्यार्थीहरू छन् जुन भर्खरै एक सहयोगीको साथ साना कागजातहरूमा काम गर्ने रिपोर्टिङ गर्न सक्षम थिए। मेरा एक पूर्व छात्र, केवल एक दुई-वर्ष को डिग्री संग सशस्त्र, देश को चारै ओर उनको पांच वर्ष को लागि काम गरे, मोंटाना, ओहायो, पेंसिल्वेनिया र जर्जिया मा लेखहरुमा रिपोर्टिंग gigs गर्दै छन्।
तर अन्ततः, यदि तपाईं ठूलो र अधिक प्रतिष्ठित कागजातहरू र वेबसाइटहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने, स्नातकको डिग्रीको कमीले तपाईंलाई चोट पु ¥ याउनेछ। यी दिन, मध्यम आकारको ठूलो समाचार संस्थाहरूमा, एक स्नातक डिग्री न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा देखा पर्दछ। धेरै पत्रकारहरू क्षेत्र मास्टर मार्फत डिग्री प्रवेश गर्छन्, वा पत्रकारितामा वा रुचिको विशेष क्षेत्रमा।
सम्झनुहोस्, एक कठिन अर्थव्यवस्थामा, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पत्रकारिता जस्तै , तपाईं आफैंलाई प्रत्येक फायदा दिन चाहानुहुन्छ, आफैलाई दायित्वमा नराख्नुहोस्। र एक स्नातक डिग्री को कमी अन्ततः एक जिम्मेवारी हुनेछ।
अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्दै, धेरै अध्ययनले देखेको छ कि कलेजको ग्राउडले प्रायः उच्च स्तरको डिग्रीको साथ ती कम बेरोजगारी दरहरू भन्दा कम छ।
आर्थिक नीति संस्थानले हालको महाविद्यालय स्नातकोत्तरका लागि बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत (2007 मा 5.5 प्रतिशतको तुलनामा) छ, र बेरोजगारी दर 14.9 प्रतिशत (तुलना 9.6 प्रतिशत 2007 सँग) हो।
तर हालैका उच्च विद्यालयका स्नातकोत्तरका लागि, बेरोजगारी दर 195 प्रतिशत (तुलनामा 15.9 प्रतिशतको तुलनामा), र बेरोजगारी दर 37.0 प्रतिशत रहेको छ (तुलनामा 26.8 प्रतिशतसँग)।
अधिक पैसा बनाउनुहोस्
आय शिक्षा पनि प्रभावित हुन्छ। धेरै अध्ययनहरूले फेला पारेका छन् कि कलेजले कुनै क्षेत्रमा ग्रिडलाई मात्र उच्च स्तरको डिग्रीसँग धेरै कमाउँछ।
र यदि तपाईंसँग मास्टर डिग्री वा उच्च छ भने, तपाईं अझ बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। जर्ज टाउन अध्ययनले पाएको छ कि पत्रकारिता वा संचारमा भर्खरै कलेज कलेजको लागि औसत आय 33,000 डलर थियो; स्नातक डिग्री धारकहरूको लागि यो $ 64,000 थियो
अमेरिकाको जनगणना ब्यूरोको एक रिपोर्ट अनुसार, सबै क्षेत्रहरूमा, एक उच्च डिग्री डिप्लोमा भन्दा जीवनभर आय कमाई $ 1.3 मिलियनको लायक छ।
एक वयस्कको काम गर्ने जीवन भन्दा माथि, हाई स्कूल स्नातकहरूले औसतमा $ 1.2 मिलियन कमाउन अपेक्षा गर्न सक्छन्; ती स्नातकको डिग्रीसँग, $ 2.1 मिलियन; र एक मास्टर डिग्री संग मान्छे, $ 2.5 मिलियन, जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट पाइयो।
"जनगणना ब्यूरो रिपोर्टको सह लेखक जेनिफर शेसेन डेले" धेरै उमेरमा, अधिक शिक्षा उच्च आय संग बराबर छ, र वेतन उच्चतम शैक्षिक स्तरमा उल्लेखनीय छ। "
मलाई थाहा छ कलेजको डिग्री सबैको लागि होइन।
मेरो केही विद्यार्थीहरू कलेजमा चार वर्ष बिताउन खर्च गर्न सक्दैनन्। अन्य विद्यालय भर्खरै थोरै छन् र उनीहरूको क्यारियर र वयस्क जीवनको साथ सुरु गर्न पर्खन सक्दैनन्।
तर यदि तपाईं सोचिरहनुभएको छ कि कलेजको डिग्री यसको लायक छ भने, लेख भित्तामा छ: तपाईसँग बढी शिक्षा, तपाईले थप बनाउनु भएको पैसा, र कम बानी यो बेरोजगार हुनेछ।
Newswriting मा उल्टा पिरामिड कसरी प्रयोग गर्ने
तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट माथि ज्याज गर्न ठूलो समाचार वेब विजेटहरू
सार्वजनिक सम्बन्ध र पत्रकारिता बीचको भिन्नता
केट रिपोर्टर के हो?
पूर्ण समाचार रिपोर्टिंग को गुप्त के हो? सबै तथ्यहरू प्राप्त गर्दै।
2010 को शीर्ष 10 समाचार कहानियां
पत्रकारहरूको लागि फिचर कथाहरूको प्रकार
कलेजमा पत्रकारिता डिग्री प्राप्त गर्ने प्रविधिहरू
'ब्रोहोल' मा जन्मे जाना ब्रिसकी उनको पहिलो प्रेममा फर्काउँछ: फोटोग्राफी
केन्जे नागाई: म्यांमारमा जापानी पत्रकारिताको हत्या
जर्नलिज्ज जर्नल र क्यारियरको विभिन्न प्रकारको एक दृश्य
Perdón I-601 को ग्रीन कार्ड को लागी इंजेक्शन को लागी
Universal Solvent Definition
ट्रोजन युद्ध मा प्रमुख चित्र
केरल को विवेक भूत
एकल ब्यान्ड ऊर्जा तालिका
दोस्रो विश्वयुद्ध: यूएसएस हानकॉक (सीवी-1 9)
प्लास्टिक कीड़े संग बास मत्स्य पालन को लागि हुक
बोस डे डे उद्धरण
Académie Française, फ्रांसीसी भाषा को मध्यस्थ
PSAT स्कोरहरू कहिले जारी छन्?
स्केटबोर्डर्सका आमाबाबुको शीर्ष9प्रश्न
वर्दी टायर गुणस्तर ग्रेडिंग
सामान्य रसायन र कहाँ तिनीहरूलाई खोज्न
अन्तिम परीक्षाको लागि तयारी गर्दै
शीर्ष गोल्फ जीवविज्ञान र आत्मकथा
8 स्पोर्ट्स अझै पनि ओलम्पिकले Shafted
रोशेल नमक कसरी बनाउने?
टेनिस रकेट को एक ईवोल्यूशनरी इतिहास
10 हालै विलुप्तता पुनरावृत्ति
अपराध अलर्ट: वाइन्डशाल्डमा अ Egg / नक्कली बेबी कार सीट नजिकैको सडक
सबै 10 समयको आयरिश गोल्फर्स
सबै नदीहरू प्रवाह दक्षिण?
राष्ट्रपति Gerald Ford's Presidency को छविहरु
म्युचुअल आश्वासन विनाश
Manatees को प्रकारहरू
गोल्फमा 'बाहिरको एजेन्सी' के हो?